शा रीरिक स म्पर्कका बेला महिलाबारे पुरूषले जान्नुपर्ने ५ कुरा ! - दैनिक नेपाल न्युज
जसका कारण चासो भएर पनि मानिस यसबारे सोध्ने हिम्मत गर्दैनन् । तसर्थ महिलाका बारेमा पुरुषले जान्नै पर्ने केहि जानकारी दिदैँछौ । – स म्भोगका बेला महिलामा एस्ट्रोजनको स्तर बढ्ने भएकाले यसले अनुहारको छाला नरम हुने र कपाल चम्किलो हुन्छ साथै रक्तप्रवाह पनि बढ्ने गर्दछ । तसर्थ यो समय उनीहरु अधिक सुन्दर र आकर्षक देखिन्छन् ।
– महिलाहरु शारी रिक स म्पर्कका बेला पार्ट नरप्रति अत्यधिक प्रेम दर्शाउछन् । यस बेला उनीहरुमा का मुकता बढ्ने भएकाले पुरुषको शरीर सु’म्सुम्याउन र प्रेम दर्शाउन रुचाउँछन् । -कुनै पनि चि’न्ता वा त ना-वग्रस्त भएका बेला महिलाहरु शरी रिक स म्पर्कका लागी तयार हुन सक्दैनन् । त नावले महिलाको यौ न रुचीमा कमी ल्याउँछ ।
– शा री रिक स’म्पर्कअघि दुबै पार्ट-नरबीच मान सिक तथा शा री रिक तयारी हुनु पर्दछ । तर कतिपय अवस्थामा पुरुषहरु महिला पा र्टनरको ‘मुड’ नबुझि ज बरजस्ती स म्बन्ध राख्न खोज्छन् । तर यसले बिस्तारै महिलालाई यौ नबाट घृ णा उत्पन्न हुन्छ । – कतिपय ब्यक्तिमा शा-रीरि क सम्प र्कपछि यो नीलाई सफा गरे वा केहि बेर टुक्रुक्क बसे ग र्भ रहदैन भन्ने गलत मान्यता छ ।महिला ग र्भवती हुन वी र्य यो निभित्र प्रवे श गरेपछि यो तीव्र रुपमा सक्रिय हुन्छ । तसर्थ यो भ्र म हो ।
यौ’न जीवन कसरी खुसी राख्ने ? यौ ’न स’म्ब न्ध सन्तान जन्मा उनका लागि मात्र नभइ दाम्पत्य जीवन सफल बनाउन पनि यसको अपरिहार्य छ । साथै यो पछिल्लो समय मनोरञ्जनको एक माध्यमको रुपमा बढ्दै गएको छ । यौ ’नमा आ नन्द लिनकाका लागि केही उपायहरु अपनाउन आवश्यक छ । यौ-न स’म्पर्कलाई जति लामो र आनन्ददायी बनाउन सकिन्छ त्यतिनै पा-र्टनरबीचको सम्बन्धपनि बन्न जान्छ । त्यसैले यौ’न स’म्प-र्कका लागि केही कुरा जान्न आवश्यक छ ।
विभिन्न रुढिवादी विचारलाई दिमागबाट टाढा राखेर सबैभन्दा पहिले कसरी लामो समय यौ’ नको ‘मज्जा’ लिने भन्ने कुरा सोच्नुहोस्। यौ’नस’म्पर्क गर्ने भन्दा पनि लामो समय एक–अर्कासँग ‘जिस्किएर’, खेलेर तथा कुराकानी गरेर ‘मज्जा’ लिने प्रयास गर्नुहोस्। एक–अर्काको सं’वे-दनशील अं’ग चला’उनुहोस् र उत्ते’जनामा आउने प्रयास गर्नुहोस् ।
गायक बादल थापाको स्वरमा ”नेताले देश डुबा हो “सार्वजनिक
काचो लसुन खान कत्तिको फाइदा जनक ?